Iingoma ezibalulekileyo zeMardi Gras
Iimvumi zeMveli kwiMigodi yaseMelika yeMardi Gras
I-Mardi Gras ibinzana lesiFrentshi elisentsingiselo elithetha "uLwesibili seFat," kwaye ngokwemigqaliselo elula kakhulu, yabizwa ngokuba negama lokugqibela ukuze uhlalise ngaphambi kokuyeka isono kwiholide yamaKatolika.
Izithethe ezijikeleze ukubhiyozelwa kweMardi Gras eLouisana zilula zonke iindlela zokusungulwa kweNew Orleans ngabazalwana abahlolisayo base-Iberville nase-Bienville. Kukholelwa ukuba bafika kwindawo eya kuba yiNew Orleans kwiLundi Gras eyinto engaphambi komhla ngaphambi kweLente, okanye "iMatriki ngoMsombuluko."
IMardi Gras Music eNew Orleans
Ukususela ngoko, uMardi Gras kunye neNew Orleans baye bangena ngesandla. Iimpawu zomculo zeeholide zivela ekubulaweni kweenkcubeko eziphambili kwesi sixeko. Cishe kwasekuqaleni, igumbo lamaFrentshi, eCanada, eMelika kunye naseCaribbean iicandelo liye laphazamisa umculo weNew Orleans kunye nomkhosi wayo weMardi Gras. Ukuba uke wahamba ngeSitalato saseCanal ngomhla weMardi Gras, uyazi into endiyithethayo. Nazi ezinye zeengoma ezinkulu zemveli eziye zafana ne-American Mardi Gras.
Kwiminyaka emininzi, abantu base-Afrika nabaseMelika e-New Orleans babenomkhosi ohlukeneyo ovela kumhlophe abamhlophe kwiCanal Street. I-Black Mardi Gras yenzeke kwi-Avenue yeClaiborne, eyawunqamle iTrme kunye namanye amakhelwane ase-Afrika aseMelika. Omnye we-African-American krewes wavelisa isithethe samaNdiya aseMardi Gras ukuba ahloniphe iintlanga zendawo ezazisinceda izigqila ezibalekile ngaphambi kweMfazwe Yomphakathi.
"Iko Iko" ingoma ngokuphathelele amaNdiya aseMardi Gras, ukulinganisa iilwimi zabantu baseMelika baseMerika, kwaye bahlonele le nkcubeko enzulu.
"Xa Abangcwele Baya Kukhwela"
Ukususela ekuqaleni kwayo, i-New Orleans ibe yidolophu yamaKatolika, kwaye "Xa AbaNgcwele Bahamba Ngenaye" baqalisa ingoma yenkolo edlalwe ngexesha lokungcwaba.
Imingcwabo yaseNew Orleans yendabuko ibandakanya umkhondo ukusuka kwikhaya lokungcwaba ukuya emangcwabeni, epheleleyo kunye nebhinqa kunye nabantu abaphethe ibhokisi. "Xa abaNgcwele" beza kuthiwa badlalwe ngokukhawuleza njengengoma yokulila endleleni eya ethuneni, kwaye babeza kudlalwa kwaye badlalwe ngetoni yokubhiyozela ekupheleni komngcwabo.
Ngokuqinisekileyo, le ngoma yayisasazeka kakhulu ngumculo wasekhaya uLouis Armstrong njengenombolo ye-jazz kwiminyaka ye-1930, kwaye iqhutyelwa kule mihla naluphi na inani lee-jazz kunye nebhedu eNew Orleans njenge-dixie land land jazz. Amanqanaba amaninzi amanqaku athatha inxaxheba kwiimpawu zeMardi Gras ziya kwenza "Xa abaNgcwele" bekhuleka emzini wabo waseNew Orleans.
"Yiya kwiMardi Gras"
Le ngoma, ebhaliweyo nguNjingalwazi Longhair - enye yeengcingo zomculo ezinkulu kakhulu zaseNew Orleans - ihlanganisa iintlobo ezimbini ezithembekileyo zikaMardi Gras: i-parade yaseZulu neyesibini. IsiZulu siyi-African-American krewe (ngokwenene "i-Social Aid kunye neKlabhu yePleasure") i-parade yayo ibandakanya ukukhwabanisa kweekhonkco zegolide kwaye enye yeyona nto inkulu kakhulu yokubhabha ngoMgqibelo ngoMardi Gras. Ekuqaleni isalathisi esivela kwi-Black Mardi Gras eCongo Square, isiZulu manje iphelela kwiSitalato seCanal njengazo zonke ezinye iindawo eziphambili.
"Yiya kwiMardi Gras" uhlabelele ngomntu oza kuNoLa ukuze abone ingqungquthela yaseZulu. Gcwalisa ngekhwela kunye nomgca we-second row line, le ngoma ingenye yezinto eziyinxalenye yokubhiyozela iMardi Gras.
"Ukuba Ndize Ndiyeke Ukuthanda"
Ingoma eyingqungquthela yamiselwa ingoma esemthethweni kaMardi Gras emva kokuba iKrewe yeRex iqulunqwe kuqala ngasekupheleni kwee-1800, ukuqokwa kwenkosi, iiflegi zeMardi Gras kunye nembala eluhlaza, igolide kunye nebomvu, emele ukholo, amandla kunye nobulungisa. "Ukuba ndize Ndiyeke Ukuthanda" kwakuyimvumi esemthethweni yonyaka weRex ipadesi, kwaye sele sele ithathwa njengenye yeengoma ze-Mardi Gras.
"Udidi lwe sibini"
Ngokwesiko, umgca wesibini uvela kwi "funeral jazz" kwaye, njengoko uMardiGrasUnmasked.com ebeka, "iindwendwe ezingahambelwanga ngamnye umntu alindele ukubonisa." Ibhendi kunye nabalila bedanisa phantsi kweso sitrato, bahlanganiswa nesihlwele esakhulayo esiqhubekayo sabantu abadanisa edolophini ukuba bangcwabe umntu oshonile baze babhiyozele ubomi.
Ingoma ethi "Umgca we sibini," nangona kunjalo, ingoma eyayidlalwa yi-Stop, Inc., ngowe-1970.
Ukuhlanganiswa kwamanani amabini ahlukeneyo, "i-Picou's Blues" kunye ne "Whuppin" Blues, "kunye ne" Second Line "izingxenye 1 no-2, ziye zaba ezinye zeengoma ezidlalwa kakhulu ngeengxowa zethusi eNew Orleans. imini kunye nonyaka.
Nangona "I-Second Line" kunye "Yiya kwiiMardi Gras" ziqulunqwa ngokutsha, ziye zagxininisa kakhulu kwizithethe ezijikeleze lo mbhiyozo wonyaka. Ukuphefumlelwa kwabo kuvela kumakhulu eminyaka yomculo waseCarniva oqhuba iMigodi yaseMelika iMardi Gras.
Kukho, ke, amakhulu eengoma ezikhumbuza iMardi Gras kunye nokubhiyozela iinkcubeko ezizityebi kunye nezithethe zaseNew Orleans. Ngolunye lweengoma zidibanisa izinto zomculo wendabuko ngenjongo yokubhiyozela, ukudansa, nokuba nexesha elihle-kwaye yiloo nto uMardi Gras ayenayo.
Iimpawu zeMardi Gras ezicetywayo
I-Krewe Umculo: I-Dixieland Jazz ye-Mardi Gras Parade eNew Orleans (Ukuhlanganiswa)
Ultimate Rebirth Brass Band (Ukuzalwa kwakhona kweBrass Band)
Ndidibana NgeMardi Gras (eyahlukeneyo)
Iingoma eziyimfuneko zee-Sam Hunt Country songs
Izizathu ezingama-20 Kutheni uMarvin Gaye wayeyiNkosana yaseMotown
Iingoma eziyi-100 eziphezulu zePop yase-2001
Iifayile zeeQueensryche ezigqwesileyo
Iingoma ezili-10 eziphezulu zePop - Ehlobo 2002
I-Anita Baker Yezihlandlo Ezilishumi Ezikhulu Kakhulu
Top 10 Happy Pop Iingoma
Iingoma eziphezulu zeR & B zokuSebenza
'Imibuzo yePrans Van Winkle' yeSifundo kunye neNgxoxo
Usuvele Ukwazi Iingoma ZamaGrike
ULydia Maria Child: Phesheya koMlambo kunye noMthi
Indlela yokuQala iSikolo sabucala
UDavid Letterman weLiberal
Indlela yokubala nokuNciphisa iCarbon Footprint yakho
Ukuqonda i-Delphi Class (kunye neRekhodi) Abancedisi
UVictor Vasarely, iNkokeli ye-Op Art Movement
I-Etruscan Ubugcisa: I-Stylistic Innovations e-Italiya yakudala
Iimfazwe zasePheresiya - iMfazwe yaseSalamis
Imfazwe Yehlabathi II: I-Fleet Admiral William "Bull" Halsey
I-Top 10 Led Zeppelin Iingoma
Imfazwe Yehlabathi II: Messerschmitt Bf 109
'Soy Casada' okanye 'Estoy Casada'?
Dictionary i-American Heritage Student Dictionary